Mobile Game Review – Disney Heroes : Battle Mode – Gaming Noodle
Game Review – Disney Heroes : Battle Mode
အမျိုးအစား – RPG
ထုတ်လုပ်သူ – PerBlue
ပလက်ဖောင်း – iOS, Android
Disney နဲ့ Pixar ရဲ့ နာမည်ကျော် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ RPG ဂိမ်း Disney Heroes Battle Mode ကတော့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီမိုဘိုင်းဂိမ်းထဲမှာ The Incredibles, Zootopia, Wreck-it Ralph, Toy Story, Monster Inc., WALL-E နဲ့ ဂျက်စပဲရိုးတို့ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ ဆော့ချင်စိတ် ဖြစ်သွားမိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကစားရတဲ့ပုံစံကတော့ မိုဘိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေကြ RPG (Role-playing) ဂိမ်းတွေလိုပါပဲ။ ဟီးရိုးတွေကို ပုံးတွေထဲကနေ မဲနှိုက်ဝယ်ယူရမယ်၊ မစောင့်နိုင်ရင် ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်၊ ဟီးရိုးတွေကို Upgrade တင်ပြီး အကောင်းဆုံး ဟီးရိုးငါးယောက်ကို ရွေး ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းကတော့ Vanellope(Wreck-It Ralph) နဲ့ Ralph တို့အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမ္ဘာကြီးထဲ အလည်ရောက်လာရာကနေ စတင်ထားပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို ထူးဆန်းတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုက ဝါးမျိုနေပြီး ဟီးရိုးတွေကိုယ်တိုင် အသိဥာဏ်မဲ့ ထိန်းချုပ်ခံနေရတဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ စပြီးတွေးမိတာက King Candy ကိုပါ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်း Mr. Incredible ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ Elastigirl နဲ့ ပူးပေါင်းမိတဲ့ အခါမှာတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးကို လွတ်မြောက်ဖို့ လူစုပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ လက်သည်တရားခံကရော တကယ်ပဲ King Candy ဖြစ်နေဦးမလား ဆိုတာကိုတော့ တိုက်ခိုက်ရင်း ရှာဖွေရမှာပါ။
2018 မေလ ၁၇ ရက်နေ့ကမှ စတင်ထုတ်လွှင့်လာတဲ့ Disney Heroes Battle Mode (ရှည်လိုက်တာ၊ အတိုကောက် DHBM ပဲခေါ်ပါရစေတော့) ဟာ Android, iOS ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးမှာ ထိပ်တန်း အခမဲ့ဂိမ်းစာရင်းဝင်နေပါတယ်။
စမ်းဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို တရားဝင်ပုံရိပ်အနေနဲ့ အသုံးချထားတဲ့ ပြေပြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းသွားကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု ရစေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် gameplay ကတော့ ဘာမှထွေထွေထူးထူး မရှိပါဘူး။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို သာမာန်မိုဘိုင်း RPG ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အဓိကအားသာချက်က တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ရတဲ့ ကာရိုက်တာတွေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပိုပြီး ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာနိုင်တဲ့ potential ပါပဲ။
နောက်ဆုံး Update တွေမှာဆို ယခုလက်ရှိ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ Toy Story (4) က Bo Peep တို့ Ducky & Bunny တို့ပါ ပါဝင်လာပါတယ်။
ဂိမ်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ပြီး အပြင်မှာလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Animation ရုပ်ရှင်တွေ အနေနဲ့
12. Big Hero6တို့မှ ဇာတ်ကောင်များ အပြင်အခြား Disney နဲ့ Pixar မှ ဇာတ်ကောင်အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။
Game play အနေနဲ့ level 10 ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ ကစားရတာ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ stamina bar ကလည်း level တစ်ခါတက်တိုင်း 30+ လောက်ရတော့ မကုန်ပါဘူး။ level 12 နောက်ပိုင်းမှာ stamina ရှားလာပြီး Elite mode ပွင့်သွားတဲ့အခါ ဟီးရိုးတွေကို upgrade/ unlock လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ hero အစိတ်အပိုင်းတွေ ပေးတာကြောင့် stamina ပိုကုန်စရာဖြစ်ပါတယ်။
DHBM ဂိမ်းဟာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အပျော်ဆော့မယ့် သူတွေအတွက် အန္တရာယ်မရှိလှပေမယ့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကာရိုက်တာကို မြန်မြန်လိုချင်တဲ့သူမျိုး၊ နာရီနဲ့ချီပြီး ဆော့ချင်တဲ့ သူမျိုးတွေ ဆိုရင် ပိုက်ဆံထွက်ကိန်း မြင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Disney – Pixar ဇာတ်ကောင်တွေကို ရူးသွပ်တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီဂိမ်းကို ရက်တော်တော်ကြာ ဆော့ကစားနေကြဦးမှာပါပဲ။ အခုတလော Mobile RPG အမျိုးအစားထဲမှာ ပေါက်ဂိမ်းလည်း မရှိသလောက်ဆိုတော့ Disney ရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နောက်ထွက်လာမယ့် update တွေမှာ နောက်ထပ် ကာရိုက်တာအသစ်တွေ ပါဝင်လာတာ၊ ရုံတင်ကားတွေနဲ့ ဆက်စပ် event တွေ Hero အသစ်တွေ အမြဲပါဝင်လာမှာကြောင့် Animation ရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေအတွက် လုံးဝလက်လွှတ်မခံ သင့်တဲ့ ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အမြိုးအစား – RPG
ထုတျလုပျသူ – PerBlue
ပလကျဖောငျး – iOS, Android
Disney နဲ့ Pixar ရဲ့ နာမညျကြျော ကာတှနျးဇာတျကောငျတှကေို အသုံးပွုထားတဲ့ RPG ဂိမျး Disney Heroes Battle Mode ကတော့ ထှကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီမိုဘိုငျးဂိမျးထဲမှာ The Incredibles, Zootopia, Wreck-it Ralph, Toy Story, Monster Inc., WALL-E နဲ့ ဂကျြစပဲရိုးတို့ ပါဝငျတယျလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ အမာခံပရိသတျတှကေတော့ ဆော့ခငျြစိတျ ဖွဈသှားမိမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။
ကစားရတဲ့ပုံစံကတော့ မိုဘိုငျးပျေါမှာ တှနေ့ကွေ RPG (Role-playing) ဂိမျးတှလေိုပါပဲ။ ဟီးရိုးတှကေို ပုံးတှထေဲကနေ မဲနှိုကျဝယျယူရမယျ၊ မစောငျ့နိုငျရငျ ပိုကျဆံပေးပွီး ဝယျ၊ ဟီးရိုးတှကေို Upgrade တငျပွီး အကောငျးဆုံး ဟီးရိုးငါးယောကျကို ရှေး ဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးပါ။
နောကျခံဇာတျကွောငျးကတော့ Vanellope(Wreck-It Ralph) နဲ့ Ralph တို့အတူ ဒဈဂဈြတယျ ကမ်ဘာကွီးထဲ အလညျရောကျလာရာကနေ စတငျထားပါတယျ။ ဒဈဂဈြတယျကမ်ဘာကို ထူးဆနျးတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတဈခုက ဝါးမြိုနပွေီး ဟီးရိုးတှကေိုယျတိုငျ အသိဉာဏျမဲ့ ထိနျးခြုပျခံနရေတဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ စပွီးတှေးမိတာက King Candy ကိုပါ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့ခငျပှနျး Mr. Incredible ကိုလိုကျရှာနတေဲ့ Elastigirl နဲ့ ပူးပေါငျးမိတဲ့ အခါမှာတော့ ဒဈဂဈြတယျကမ်ဘာကွီးကို လှတျမွောကျဖို့ လူစုပွီး တိုကျပှဲဝငျရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဗိုငျးရပျဈရဲ့ လကျသညျတရားခံကရော တကယျပဲ King Candy ဖွဈနဦေးမလား ဆိုတာကိုတော့ တိုကျခိုကျရငျး ရှာဖှရေမှာပါ။
2018 မလေ ၁၇ ရကျနကေ့မှ စတငျထုတျလှငျ့လာတဲ့ Disney Heroes Battle Mode (ရှညျလိုကျတာ၊ အတိုကောကျ DHBM ပဲချေါပါရစတေော့) ဟာ Android, iOS ပလကျဖောငျးနှဈခုလုံးမှာ ထိပျတနျး အခမဲ့ဂိမျးစာရငျးဝငျနပေါတယျ။
စမျးဆော့ကွညျ့တဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျနှဈသကျခဲ့ရတဲ့ ဇာတျကောငျတှကေို တရားဝငျပုံရိပျအနနေဲ့ အသုံးခထြားတဲ့ ပွပွေဈတဲ့ ဇာတျလမျးသှားကွောငျ့ ပြျောရှငျမှု ရစတောတော့ အမှနျပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ gameplay ကတော့ ဘာမှထှထှေထေူးထူး မရှိပါဘူး။ အထကျမှာ ပွောခဲ့သလို သာမာနျမိုဘိုငျး RPG ဂိမျးတဈခုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အဓိကအားသာခကျြက တရားဝငျသုံးစှဲခှငျ့ရတဲ့ ကာရိုကျတာတှနေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ ပိုပိုပွီး ကွီးမားကယျြပွနျ့လာနိုငျတဲ့ potential ပါပဲ။
နောကျဆုံး Update တှမှောဆို ယခုလကျရှိ ရုံတငျပွသနတေဲ့ Toy Story (4) က Bo Peep တို့ Ducky & Bunny တို့ပါ ပါဝငျလာပါတယျ။
ဂိမျးထဲမှာလညျး ပါဝငျပွီး အပွငျမှာလညျး အောငျမွငျကြျောကွား လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ Animation ရုပျရှငျတှေ အနနေဲ့
12. Big Hero6တို့မှ ဇာတျကောငျမြား အပွငျအခွား Disney နဲ့ Pixar မှ ဇာတျကောငျအမြားအပွား ပါဝငျပါတယျ။
Game play အနနေဲ့ level 10 ရှပေို့ငျးမှာတော့ ကစားရတာ အလှနျလှယျကူပါတယျ။ stamina bar ကလညျး level တဈခါတကျတိုငျး 30+ လောကျရတော့ မကုနျပါဘူး။ level 12 နောကျပိုငျးမှာ stamina ရှားလာပွီး Elite mode ပှငျ့သှားတဲ့အခါ ဟီးရိုးတှကေို upgrade/ unlock လုပျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ hero အစိတျအပိုငျးတှေ ပေးတာကွောငျ့ stamina ပိုကုနျစရာဖွဈပါတယျ။
DHBM ဂိမျးဟာ စိတျရှညျရှညျနဲ့ အပြျောဆော့မယျ့ သူတှအေတှကျ အန်တရာယျမရှိလှပမေယျ့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ ကာရိုကျတာကို မွနျမွနျလိုခငျြတဲ့သူမြိုး၊ နာရီနဲ့ခြီပွီး ဆော့ခငျြတဲ့ သူမြိုးတှေ ဆိုရငျ ပိုကျဆံထှကျကိနျး မွငျပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ၊ Disney – Pixar ဇာတျကောငျတှကေို ရူးသှပျတဲ့ သူတှကေတော့ ဒီဂိမျးကို ရကျတျောတျောကွာ ဆော့ကစားနကွေဦးမှာပါပဲ။ အခုတလော Mobile RPG အမြိုးအစားထဲမှာ ပေါကျဂိမျးလညျး မရှိသလောကျဆိုတော့ Disney ရဲ့ ပုံရိပျကို မွှငျ့တငျပေးပွီး နောကျထှကျလာမယျ့ update တှမှော နောကျထပျ ကာရိုကျတာအသဈတှေ ပါဝငျလာတာ၊ ရုံတငျကားတှနေဲ့ ဆကျစပျ event တှေ Hero အသဈတှေ အမွဲပါဝငျလာမှာကွောငျ့ Animation ရုပျရှငျ ပရိသတျတှအေတှကျ လုံးဝလကျလှတျမခံ သငျ့တဲ့ ဂိမျးပဲဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။